Zuva: Chivabvu 23, 2020
Chinyorwa chemakambani Akatengeswa Kune Vatorwa Kune Makore gumi apfuura
Vanamuzvinabhizimusi veTurkey vanotenga misika yavo yemisika mumisika yekune dzimwe nyika nepamusika kuburikidza nekuedza kwakawanda, vashandi, marisiti uye mari. Bhodhi Yemakwikwi, mu2016 [More ...]
YHT, Outline uye Regional Trains Hapana Tiketi Inotengesa Under 20 uye Kupfuura 65
Gurukota rezvekutakura nekuvakwa kwezvinhu, Adil Karaismailoğlu, akataura kuti masuo emiganhu uye zvinorambidzwa zvakaiswa mukati mechiyero chematanho ekurwisa rudzi rutsva rwe coronavirus ane hukama hwakawanda mumagariro. Panguva ino hutachiona seHurumende [More ...]
YHT Expeditions Kutanga neMatanho anotorwa paMay 28! Tickets achaiswa vakatengwa HEPP Application
Gurukota rezvekutakurwa nezvivakwa Adil Karaismailoğlu: Kutengesa kwezvitima zvekumhanya zvikuru kuchatanga pazuva repiri reRamadan. Nekudaro, matikiti ezvitima anonyanya kuwanikwa kubva kune runharembozha webhusaiti uye webhusaiti kana mataira pasina kubatana. [More ...]
Ankara Metropolitan Municipality inoenderera mberi 7/24 basa re asphalt munguva yekubuditsa yakaziviswa sechikamu chekurwisa kubuda kwe coronavirus. Dhipatimendi reSainzi, iro rakabata matani makumi matatu nemazana matatu nemakumi matatu nemasere easphalt. [More ...]
Xperia Hotels dzakasvika padanho rekupedzisira kuzoisa mari mu Erciyes. Meya weMetropolitan Dr. Memduh Büyükkılıç akazivisa kuti hotera, iyo yasvika padanho rakaputsa, ichave nemabhedha mazana mashanu nemakumi mashanu. Meya weMetropolitan Dr. Mamdouh [More ...]
Kocaeli Metropolitan Municipality ichapa vanotakura mahara zvifambiso zvevashandi vakasununguka pakati pe52 - 07.00, 09.00 - 17.00 nemabhazi makumi mashanu nemashanu. Mugovera, Chivabvu 19.00 uye 23,25 [More ...]
Ndiani Ave TCDD General Management Kubva Kubva Kugadzwa Kwayo? 1923 km ye njanji 1960 km yakavakwa pakati pa3.578-3.208 ndiyo yakapera kusvika 1940. Munguva ino, iyo institution yakabatana kune Ministry of Transport uye [More ...]
Ali İhsan Uygun, akaberekerwa muOrdu munaKubvumbi 12, 1966, akapedza kudzidza kuIstanbul technical University Electrical uye Electronics Faculty Electrical Engineering department muna1987. Muna 1988, Istanbul University Faculty of Bhizinesi Rekushandisa Bhizinesi Ehupfumi [More ...]
The yechitanhatu yepasi pemvura Information Distribution System (DBDS) yakataurwa HAVELSAN mukati yezvinoreva New Type yepasi pemvura Project (YTDP) vakabuda dzaFord uye akapinda bvunzo mutsetse. Pakati kambani German TKMS uye Defense Industry Directorate (SSB) [More ...]
Kana zvasvika kumahofisi ekufambisa mabasa, tinogona kutaura kuti boka remakambani ekufambisa rakachinja ichi kuita chikamu nekupa iri basa. Kuzivikanwa uko kwave kuchiwanikwa pamwe nekuwedzerwa kwebasa rekufambisa kuenda kumba kune dzimba ikozvino kuita mahofisi. [More ...]
Mutungamiri wePurezidhendi weDziviriro Dziviriro. Dr. Ismail Demir, STM Defense Technologies Engineering uye Trade AŞ funga tank rakarongwa ne STM Funga Tech vhidhiyo-musangano, "Kovid-19 muTurkey uye process uye Beyond. [More ...]
World Tourism Organisation (UNWTO) yesangano reUnited Nations yakaburitsa May 2019 barometer, iyo inosanganisira 2020 dhata. Panguva iyo Turkey yakatorawo nyika yechi6 yakashanyirwa zvikuru munyika uye maviri mune mapato ezvekushanya [More ...]
Yet Turkey Campaign Yotitsigira Tave Kuenda 2 Bhirion TL
Mhuri, Vashandi neVashandi veMagariro [More ...]
Inoenderera mberi ichisangana nezvidikanwa zvakawanda zvevagari vakaremara kuburikidza neI Ministry of Family, Labor and Social Services, Social Security Institution uye İŞKUR. Nemapurojekiti akaitwa neIdhipatimendi, kuitira kuti vagari vakaremara vabatisise hupenyu zvakanyanya. [More ...]
Is Başkentray uye Marmaray Mahara?
Ivo vagari veBaskentray neMarmaray vakasununguka mahara nekusvika kwezororo? akatanga kuferefeta. Munguva yeRamadan, Baskentray neMarmaray ndege dzichasununguka. Kubva 23:2020 Mugovera, 00.00 Chivabvu XNUMX (Chishanu [More ...]
Gurukota rezvemaindasitiri nehunyanzvi, Mustafa Varank, Mutungamiriri akazivisa kuti vachazogovana neTurkey Investment Investment Bhizinesi Strategy yakapera munguva pfupi iri kutevera. Varank akati, "Tinoda kukasira kuenda nekukasira nemhedzisiro uye maitiro akasarudzika." expression [More ...]
Nekusvika kwemabiko, mabhureki emahara pamutambo? Mabhiriji nemigwagwa mikuru-mota akasununguka pamazororo? akatanga kuferefeta. PaRamadan, migwagwa mikuru uye mabhiriji zvichave zvakasununguka. Zvekuchinja kusvika Chitatu, Chivabvu 27, 07.00:XNUMX [More ...]
Kunyangwe paine nguva yekudzoka munyika yose panguva yeEid al-Fitr, kutarisisa kwakatemwa kuchaitwa mumigwagwa mikuru. Munguva yemutambo weRamadan, zviuru gumi nezvisere nemakumi mashanu nenomwe vashandi vemumigwagwa vanoshanda kubva kuMapurisa naGendarmerie zuva nezuva, ukuwo Mapurisa uye [More ...]
Misikiti ichavhura riini? Kunamata Kuchatanga Rini muMosikiti neMasjids?
Mudenderedzwa yakatumirwa nebazi rezvemukati kune maGurukota e81 ehurumende, mhando nyowani yekoronavirus (Covid- 19) mukati mechikamu chekubuda kwematanho akatorwa neDirectorate of Religious Affairs kuitira kudzivirira kupararira muTurkey; Kubva 16 Kurume 2020 [More ...]
Munguva yemazuva mana kurambidzwa kudzikwa ne İnegöl Municipality, basa rekuvandudza riri kuenderera ku Çardak Mosque Inter Assembly, iro rakanyanya kupedzwa nebasa rekupisa iro rapedzwa 4/7. Mudunhu mune iyo smart signaling system inoshandiswa [More ...]
Nekuda kwechirwere chekoronavirus, iyo wachi wachi yakauya kubva kuİZBAN maererano neyakavha ichaiswa musi wa 23, 24, 25 na 26 Chivabvu. Muchiitiko ichi, maawa ekushanda İZBAN achave anotevera:
Kamuran Yazıcı, akaberekerwa muTrabzon muna1967, akapedza kudzidza kuKaradeniz Technical University, yeFakhalthi yeEinjiniya uye Zivakwa, Dhipatimendi reCivil engineering muna1988. Akapedza Dhigiri raTenzi wake paInstitute of Science muna 1991 payunivhesiti imwe chete. Tenzi [More ...]
Zuva rechina Pre Preriction 'Turkey Runyararo Ruvimbo' application Kwakaitwa
Ministry of Interior General Directorate yeDziviriro, Gendarmerie General Command uye Coast Guard zvikamu kubva kumatunhu nyika panguva imwe chete nezuro na 08.00-24.00 maawa "Turkey Confidence Peace" chirongwa chakaitwa. Mukuita, Eid al-Fitr [More ...]
İsa Apaydın Ndiani?
Metallological injiniya, yeruzhinji maneja, TCDD General Manager. Akazvarwa muA Ankara muna 1965. Akapedza kudzidza kuIstanbul Technical University Metallological Engineering department muna1987. Akapedza dhigirii raTenzi wake muSakarya University Metallological Engineering department muna1996. [More ...]
Cahit Özkan, Mutevedzeri weAl Party Party uye Mutevedzeri waDenizli, vazivisa kuti chirongwa cheAddn-Denizli Highway Project chichaiswa mushe zvakare muna June 11. Özkan, uyo akabata musangano wevatori venhau, pamusoro peiyo Aydın-Denizli mugwagwa mukuru, [More ...]